iTunes icharamba ichiwanika yeWindows | IPhone nhau
Muvhuro wapfuura, pachiitiko chekuratidzwa kweIOS 13, wstchOS 6, macOS Catalina uye tvOS 13, Apple yakasimbisa imwe yemakuhwa anga achitenderera kwerinopfuura gore uye kuti anga aine hukama neTunes, chikumbiro icho yakaita zvese uye yaive yave dambudziko kune vazhinji vashandisi.
Nekupa akawanda maficha, iTunes yanga yave yekuremerwa application iyo kuita kwayo kwakasiya zvakawanda zvekuda. Iine macOS Catalina, iTunes inonyangarika zvachose sezvo yakakamurwa kuita zvitatu: Apple Podcast, Apple Music uye Apple TV. Nekudaro, zvinoita sekunge muWindows isu tichaenderera sepakutanga.
Sezvo isu tichigona kuverenga muAss Technica, iTunes yeWindows application icharamba iripo sezvazviri ikozvino Kuburikidza neiyo Windows application chitoro uye vashandisi veiyi sisitimu inoshanda vachakwanisa kuenderera vachishandisa kuita makopi ekuchengetedza, kudzoreredza mudziyo wavo ...
Sezviri pachena Apple haina hurongwa hwekupa paWindows, zvirinani izvozvi, iwo matatu maficha ekuti iTunes yakakamurwa kuita macOS Catalina. Iyo Apple Music application ye macOS Catalina inozozvitorera yega kuendesa zvese zviri zviviri nziyo dzatakachengeta muTunes uye dzakasiyana playback zvinyorwa zvatakasika pamusoro pemakore.
Kana uchibatanidza iyo iPhone, iPad kana iPod touch, iyo Finder inozoratidzwa otomatiki uye icharatidza izvo zvingasarudzika iTunes, kana iyo app ichiri kuwanikwa paMacOS, kusimudzira uye kudzoreredza chishandiso chako kana paine dambudziko.
Zvichida kuti mukati megore rose, Apple inoputsa iyo iTunes application zvakare paWindows sezvayakaita izvozvi neMacOS Catalina kuitira kuti usape akasiyana mashandisirwo kune vashandisi vanoshandisa zvese PC neMac mazuva ese kana kuita shanduko kubva kune imwe ecosystem kuenda kune imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » iTunes icharamba ichiwanikwa yeWindows
Aya ndiwo mapfupi ekhibhodi yeiyo itsva iPadOS 13
Apple inobvisa mukana wekusarudza pakati pe3G ne4G neIOS 13